यो सरकार गफाडीहरुको झुण्ड हो, एउटा गफाडी मन्त्रालय बनाई दिए हुन्छ (भिडियो सहित) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » यो सरकार गफाडीहरुको झुण्ड हो, एउटा गफाडी मन्त्रालय बनाई दिए हुन्छ (भिडियो सहित)
यो सरकार गफाडीहरुको झुण्ड हो, एउटा गफाडी मन्त्रालय बनाई दिए हुन्छ (भिडियो सहित)
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहनु भएका मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव मधेशमा संभावना बोकेका नेतामा गिनिनु हुन्छ । पार्टी र राजनीतिकलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ सोच बनाउनु भएका अध्यक्ष यादवका लागि अहिलेको राजनीतिक परिवेश चुनौति बनेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, परम्पराशैलीका राजनीतिकले अब मधेशले मुक्ति पाउँदैन यसका लागि केही नयाँपन दिनुपर्छ अनि मात्र मधेशले मुक्ति पाउँछ त्यसका लागि नयाँ सोचको आवश्यकता छ । प्रस्तुतछ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरुको गठबन्धनको कार्यक्रम जेठ १७ गते सकिदैछ, यो बीचमा यदि सरकारसँग केही सम्झौता भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
–संघीय गठबन्धनको तर्फबाट शुरु गरिएको पहिलो चरणको कार्यक्रम जेठ १७ गते सकिदैछ । यसबीचमा सम्झौताका लागि प्रयासहरु हुनेछ । वार्ताका लागि पहल हुनेछ । त्यसपछि पनि केही भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन । यो भन्दा पनि सशक्त तथा कडा आन्दोलन हुनेछ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ६ महिनासम्म मधेशमा आन्दोलन भयो । त्यसलाई यहाँका शासकहरुले यो क्षेत्रीय र सम्प्रदायी आन्दोलन हो । यसलाई राज्यले अर्कै रंग दिन चाहेको थियो त्यसैले हामी देशभरिका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका समुदायका साथ आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका हौं । र, मधेशी जनताको चाहना पनि यही थियो । एकीकृत भएर आन्दोलन होस् भनि चाहना मधेशी जनतले व्यक्त गर्दै आएका थिए । आन्दोलन कुनै व्यपार होइन, बजारमा बिक्ने समान होइन कि यति समयमा बिक्रि होस् । हामी काठमाडौमा तरकारी बेच्न आएका होइनौ । यो अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलन हो । यो यतिबेलै वा त्यतिबेलै टुगिंन्छ भने होइन । यो चाँडै पनि हुनसक्छ, ढिलो पनि हुनसक्छ तर आज न भोली हुन्छ नै । मुख्य कुरा यो राज्य जनताप्रति कति उत्तरीदायी छ, कति संवेदनशिल छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौ । राज्यले यसलाई हल्का ढंगबाट सधैभरि यस्तै लिइरह्यो भने आउने दिन देशमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउने काम पनि राज्यको हो ।
भदौंभन्दा पहिलादेखि नै तपाईहरु आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ । तपाईहरुले सरकारसँग पटक पटक वार्ता पनि गर्नुभएको छ, सरकारसँग के के कुरा भयो त ?
–सबै मिलाएर हामीले ३६ पटकसम्म वार्ता गरेका छौ । सायद मलाई लाग्छ यस्तो छोटो अवधिको आन्दोलनमा यतिपटकसम्म वार्ता गर्ने विश्वको इतिहासमा छैन होला । तर सरकारले यो वा त्यो बहानामा जहिले पनि आलटाल गरिरह्यो । सरकारले वार्ताको नाममा भ्रमका खेतीहरु गरिरह्यो । वार्ताकै अवधिमा सरकारले एकपटक सविधान संशोधन गरेका छन् । सविधान अपुरो भएर नै संशोधन गरेको होला । सविधान अपुरो छ, पछि संशोधन गर्नै नगर्ने गरि सबैको सहमतिमा सधिवान ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो नगरेर जविर्जस्ती सविधान जारी गर्यो तर केही दिन नबित्दै काँग्रेसले आफू खुशी सविधान संशोधन गरायो । सविधान निर्माणमा नसोधेका यी ठूला दलहरुले त्यसैगरि सविधान संशोधनमा पनि सोधेन । संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान भएन त्यसैले छलकपट गरेर समस्याको सविधान हुँदैन । बरु बल्झि रहेन । हामी वार्ता विरोधी होइन, हामी वार्तालाई चिया गफको रुपमा लिन चाहेका छैनौ सार्थक वार्ता हामी चाहेका छौ । सरकारले वार्ताका लागि विश्वसनिय आधार तय गर्नुपर्छ ।
सरकारले तपाईहरुलाई वार्ताका लागि दोस्रो पत्र पठाउँदा घाइतेका लागि निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छु, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिरहेको छु अरु के के गर्न बाँकी छ त्यसमा छलफल गरौं भन्नुभएको छ भने तपाईहरु कस्तो वतावरण चाहि रहनु भएको छ ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताका लागि पठाउनु भएको पत्रको कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने त्यो दम्भपूर्ण र आग्रहपूर्ण रहेको छ । हामीले उठाएका कुरा के हो भने आन्दोलनमा सहादत दिएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । सहिद परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घाइतेलाई निशुल्क उपचार गराउनुपर्छ । त्यसमध्ये सरकारको तर्फबाट जे हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । उपचार हामीले गराई रहेका छौ । कतै उधारोमा कतै पैसा तिरेर नै गराई रहेका छौ तर सरकारले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिनुभएको छैन । हामीले ४२ लाख खर्च भएको भन्छौ भने उहाँहरु ३१ लाख मात्र देखाउनुहुन्छ । पैसा दिने कुरामा विभिन्न विधि प्रकृयाको कुरा देखाइ रहनुभएको छ । अर्को कुरा आन्दोलनको कारण धडपकड गर्ने काम जारी रहेका छन् । महोत्तरी र टिकापुरमा हालसम्म धडपकड गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । मुद्दा लगाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले विश्वसनियता गुमाई सक्नुभएको छ । विश्वासको आधार तय गरेपछि हामी वार्ता गर्न तयार छौ । राज्य जहिले पनि जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । हामी सार्थक र परिणामुुखी वार्ता गर्न तयार छौ । वार्ताका लागि पठाएको चिठी आन्दोलन तुहाउनका लागि हो कि भने हामीलाई शंका लागेको छ । यसअघि पनि आन्दोलन जारी रहेको बेला सरकारले पटक पटक वार्ता गर्यो तर जब हामीले केही दिन बीचमा आन्दोलन छाडेपछि सोधपुछ पनि गरेन, कुनै चासो लिएन । तर, हामी फेरि आन्दोलन शुरुवाता गरेका छौ । उता वार्ताका लागि पत्र आउन थालेका छन् कतै नकतै आन्दोलन कमजोर पार्नका लागि नै यस्तो भएको हो कि भने पनि लाग्न थालेको छ ।
उहाँहरुले पनि यही भनि रहनु भएको छ, हामी वार्ताका लागि तयार छौं, हामी वार्ताका विरोधी होइन, जुनसुकै बेला पनि वार्ता गर्न तयार छौ, वार्तामा बसौं भनि पटक पटक भनिरहनु भएको छ भने वार्तामा बस्दैमा के बिग्रिन्छ ?
–होइन, हामी पनि कहाँ भनेका छौ कि वार्तामा बस्दैनौ । हामी पनि वार्तामा बस्नका लागि तयार छौ तर त्यसका लागि उचित वतावरण तयार हुनुपर्छ । वार्ताका लागि महौल बनाउनु पर्छ । आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भनेका छौ । सरकारको विश्वानियतामा माथि नै प्रश्न उठेको छ । वार्ताको टर्म हुन्छ । वार्ताका पूर्व शर्तहरु हुन्छ । जस्तै वार्तामा बस्नुअघि भन्नुपर्छ हामीले धडपकड गर्दैनौ । समातिएकालाई पनि यति दिनमा वा त्यति दिनमा छाड्दैछौ । आदि इत्यादी कुराहरु गरेर वार्ताका लागि विश्वास कायम गर्नुपर्छ । तर, सरकारले त्यस्तो नगरेर हामीसँग वार्ताका लागि कुरा गरेका छन् उतातिर आन्दोलनमा सहभागि नेता तथा कार्यकर्तालाई समातिरहेका छन् । टीकापुरमा अहिले पनि आन्दोलनकारी त्रसित छन् । महोत्तरीमा पनि उस्तै अवस्था छ । त्यसैले वार्तामा बसौं भनेर मात्र हुँदैन त्यसका लागि वतावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
जेठ ११ गते सर्वदलीय बैठकको बसाउँदा मधेशी मोर्चाकै सल्लाहमा बैठक बसाएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बाहिर ल्याउनुभयो तर त्यो दिनको बैठकमा जानु भएन, सल्लाह पनि दिने अनि बैठकमा पनि नजाने त्यस्तो किन ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी मोर्चासँग कुरा गर्नुभन्दा पनि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुरा गर्नुभएको थियो । ओलीजीले महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर वार्तामा बसौं भनि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसमा महन्थ ठाकुरले हामी वार्ता गर्न तयार छौ । तपाईहरु वार्ताको वतावरण बनाउनुस् भन्नुभएको थियो तर वतावरण तयार नगरि सिधै चिठी काट्नुभयो । र यो मोर्चाकै सल्लाहमा बैठक बोलाएको भन्नु जनतामा भ्रम छर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु भएका व्यक्तिले यस्तो झुठको खेती गर्न थाल्नुभयो । जनतामा भ्रम सृजना गर्न थाल्नुभयो भने अब कसमाथि विश्वास गर्ने ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हावा कुरा गरेर नै अहिलेसम्म टिक्नु भएको छ । र, मोर्चाको बैठकको बारेमा पनि त्यस्तै हावा कुरा गरेर भ्रम छर्ने काम गर्नुभयो ।
भनिन्छ, गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण बैठकमा नेताहरु नगएको हो, सही हो ?
–यो एकदम निराधार कुरा हो । गठबन्धनको एउटा घटकको नेता भएका हुनाले म यो कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि बैठकको बारेमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनलाई फुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ विभिन्न भ्रमका कुराहरु राखेर । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेशले जेठ १० गते साँझ ५ः३० बजे फोन गरेर भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउनु भएको छ त्यसमा आउनु पर्यो । त्यसपछि फेरि ९ः३० बजे अर्को फोन आउँछ कि इमेल ठेगाना दिनुस् प्रधानमन्त्रीको चिठी पठाई दिन्छौ । त्यसको भोलीपल्ट मेडियामा मैले स्पष्ट गरिदिए कि वतावरण तयार नभएसम्म वार्तामा जाँदैनौ । त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि गठबन्धनमा कुनै प्रकारको विवाद छैन । विवादका कुरा पनि राज्यबाट प्रचार गरिएको हो ।
त्यसो भए गठबन्धनमा कुनै प्रकारको विवाद छैन ?
–नीतिगत, सैद्धान्तिक कुनै प्रकारको विवाद छैन । कार्यप्रणालीमा कुनै विवाद छ भने त्यसलाई हामी बसेर सामाधान गर्छौ यो कुनै ठूलो कुरा होइन । आन्दोलनको विकल्प छैन । यसलाई झन गतिलोको साथ बढाउनुपर्छ यसमा कुनै दुईमत छैन । गठबन्धनले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर मधेशी मोर्चाको पनि कम योगदान छैन । मधेशी मोर्चाको आफ्नै गरिमा र अस्तित्व छ । मधेशमा सोही मधेशी मोर्चाले ६ महिनासम्म आन्दोलन गर्यो । विभिन्न समयमा वार्ता पनि गर्यो । अहिले पनि मधेशी मोर्चाको आफ्नै अस्तित्व छ जसलाई कसैले हटाउन सक्दैन ।
तपाई भन्नुहुन्छ कुनै प्रकारको विवाद छैन, तर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर त गठबन्धनको कार्यक्रममै जान छाड्नु भएको छ नि ?
–होइन त्यस्तो छैन । जुन कुराहरु बाहिर आएको छ त्यो कपोकल्पीत र निराधार रहेको छ । तपाईले हेर्नै भएको होला । जेठ २ र ३ गते सिहदरवार घेराउ हुँदा राजेन्द्र महतो सहित तमलोपाका नेताहरु पनि उपस्थित भएर कार्यक्रम सफल पारेका थिए । तीन गते बालुवाटार जानुभन्दा पहिले नै राजेन्द्र महतो अस्वस्थ्य हुनुभयो । त्यसपछि जाने कुरै भएन । उहाँका पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले हालसम्मको सबै कार्यक्रममा सहभागि हुनु नै भएको छ । त्यस्तै तमलोपाका कार्यकर्ताहरु कार्यक्रममा उपस्थित रहन्छन् तर तमलोपा नेता ह्रदयश त्रिपाठीले नै अहिले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको तयारी चलिरहेको छ त्यसमा हामी सबै व्यस्त रहने भएकाले कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता नहुनसक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसै बाहिर आएको हल्लाहरु सत्य होइन ।
गठबन्धनले मधेशी मोर्चालाई छाँयामा पारेका आरोप छ नि के भन्नुहुन्छ ?
–यो निराधार कुरा हुन् । म पनि नेताहरुबाट यस्तो कुराहरु सुनिरहेको छु । मधेशी मोर्चा कुनै प्रकारले छायाँमा पारेको छ । मधेशी मोर्चाको बृहतरुप नै गठबन्धन हो । गठबन्धनको फाउण्डेशन नै मधेशी मोर्चा हो । यसमा मधेशी मोर्चा गर्व गर्नुपर्छ । मधेशी मोर्चाले उठाएको माग आज राष्ट्रियको मुद्दा बनेको छ । सबैले मधेशी मोर्चाको पथमा हिड्न तयार भएका छन् । त्यसैले जसले भन्छ, मधेशी मोर्चालाई छायाँमा पार्यो त्यो बकवास हो । मधेशी मोर्चा झन सशक्त र परिष्कृत हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि गठबन्धनकै कतिपय नेताले गठबन्धनलाई पत्र नआएसम्म वार्तामा नबस्ने भनिरहेको कुरा पनि सुनियो त्यस्तो किन ?
–राज्यले गठबन्धनमा चलखेल गरिरहेको कुरा मैले अघि नै भनि सके । यो राज्यको षड्यन्त्र हो । म पनि गठबन्धनको एउटा घटक दलको अध्यक्ष हुँ तर मैले यो कुरा कहि कसैको मुखबाट सुनेको छैन । हो, बरु भनेका छन्, वार्ताको वतावरण तयार नभएसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौ । चाहेको त्यो गठबन्धनका लागि होस् वा मोर्चाका लागि होस् । जुनसुकैका लागि पत्र आएपनि वतावरण तयार नभएसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौ भनिकै हो । सरकारले वतावरण तयार गरे फेरि मोर्चाकै नाममा चिठी पठाओस् त कसरी वार्तामा जाँदैन । यी सबै भ्रमका कुरा हुन् ।
सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता हुँदा केही प्राप्त भएन भनिरहेको छ साँच्चै हो केही पनि उपलब्धी भएन त ?
–हो, सही कुरा हो । सरकारसँग भएको ३६ पटकको वार्तामा केही प्राप्त भएन । शुन्यमै छौ हामी । बरु अविश्वासको वतावरण सृजना भएको छ । अब हामीलाई सरकारमाथि विश्वासै लाग्दैन । वार्तामा बोलाउँछन् भने विभिन्न शंका उपशंका लाग्न थाल्छ । यो सरकार गफाडीहरुको झुण्ड हो । यो सरकारको काम कुरो एउटा, गराईछ अर्को । अब सरकारले गफाडीहरुको मन्त्रालय बनाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको कामै भएको छ मन्चमा गएर जथाभावी बोल्ने । अब त प्रधामन्त्रीले यो भन्न बेर लगाउँदैन कि भुकम्प पीडितलाई यहाँ धेरै अप्ठ्यारो भयो अब यिनीहरुलाई मंगलग्रहमा लगेर राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो हावफुसी कुराले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।
३६ पटक वार्ता भयो केही भएन भन्नुभयो, सविधान संशोधन, नागरिकताको सवाल, उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठनलगायतका कामहरु त भएका छन् के ती वार्ता अन्तर्गतका होइन ?
–हो, यी सबै माग हामीले उठाएको कुरा हो तर त्यसको प्रकृया र तरिका पुगेन । सविधान संशोधन गर्दा हामीसँग सल्लाह गरिएन । हामीसँग सल्लाह गरेको भए यो भन्दा राम्रा संशोधन हुन्थ्यो कि । तर जवर्जस्ती पेलेर सविधान संशोधन गर्नुभयो । अर्को कुरा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठनको प्रकृयालाई हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थियौं । टिओआर नबनाएसम्म समिति गठन गर्नुहुँदैन भनेका थियौं तर जवर्जस्ती बनाउने कामभयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्ली भ्रमणमा जानु थियो त्यहाँ देखाउनका लागि उहाँले हतार हतारमा समिति गठन गरेर दिल्ली जानुभयो । यो हाम्रो लागि होइन, मधेशी, आदिवासी जनजातिका लागि होइन आफ्नो लागि समिति बनाउनुभयो । नागरिकतामा केही काम गरेको छ तर अझै पुगेको छैन ।